ray – Sayfa 64 – RayHaber | raillynews
Taariikhda furitaanka ee Mashruuca Marmaray ayaa la shaaciyey. Raiisel wasaare Recep Tayyip Erdogan ayaa sameyn doona tijaabada imtixaanka bishaan. Binalı Yıldırım wuxuu sheegay in Mashruuca Marmaray uu sii soconayo oo ay hiigsanayaan inay dhameystiraan 2013 dhamaadka mashruuca. [More ...]
Dekedaha dhulku waxay sugayaan Marmaray
Ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa bilaabay inuu maal gashado si uu uga faa iideysto faa iidada mashruuca Marmaray, oo ku xiri doonta Yurub iyo Aasiya xayndaabyada xamuulka xamuulka. Arkas Holding waxay ka hirgalisay mashruucyo kala duwan Anatolia [More ...]
Cumhuriyet University (CU) Maamulaha Hafik Vocational School Asst. Jiraan barta. Dr. Nevcihan Gürsoy, kuliyadaha 3 ayaa furi doona qayb cusub oo lagu dhawaaqay. Gursoy wuxuu sheegay in barnaamijka cusub ee loogu talagalay furitaanka iskuulada 3 [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD Süleyman Karaman, Jaamacadda Karabük (KBU) Rector Prof. 8 Febraayo 2011. Dr. Burhanettin Uysal iyo Maareeyaha Guud ee KARDEMİR Fadıl Demirel. Intii uu socday kulanka lagu qabtay xafiiska Süleyman Karaman, [More ...]
30 waa saldhigga ugu weyn ee tareenka xawaaraha sare leh ee la dhameyn doono bisha dayrta gawaarida, saldhiga dhexe waxaa ku yaal Kazikli hal xarun oo ku yaala Yenisehir
Bursa waxay tirineysaa maalmaha ... 40 waxay ku riyoonaysay tareenka uu ku riyooday sanado. Xilligan, süreç Sida uu sheegay Wasiiru dowlaha Gobolka Faruk Çelik, howshu way shaqeyneysaa. 22 wuxuu uqalmaa u qalmid bishii Abriil [More ...]